တော်တဲ့ လင်ယောက်ျားတွေ မမေးတဲ့ မေးခွန်းများ – Gentleman Magazine
တော်တဲ့ လင်ယောက်ျားတွေ မမေးတဲ့ မေးခွန်းများ
တျောတဲ့ လငျယောကျြားတှေ မမေးတဲ့ မေးခှနျးမြား
တစ်ခါတစ်လေမှာ မိန်းမနဲ့ စကားပြောရတာ မိုင်းကွင်းထဲ မျက်စိစည်းပြီး လျှောက်နေရသလိုပါပဲ။ မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေထက် နူးညံ့ကာ ခံစားလွယ်ပြီး တုံ့ပြန်မှု ပိုများတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က မေးခွန်းတွေကို ဒီအတိုင်း မစဉ်းစားပဲ သူဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ယူစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ သင့်မိန်းမက သင့်ရဲ့ မေးခွန်းကို ပေါက်ကွဲစရာတစ်ခုလို ပြောင်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒိမှာ သင် သူမကို လုံးဝ မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း ၇ ခု ပါ။ အဲဒါတွေအစား ဘယ်လိုမေးရမယ်ဆိုတာလဲ မေးပြထားပါတယ်။
၁. နင် ဒီအပါတ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရဲ့လား
အဲဒါက ” နင် ဝနေသလား ” လို့ မမေးလိုက်ရုံ တမည်ပါ။ သင်က ရိုးရိုးသားသားလေး မေးလိုက်ရင်တောင် သူမက စော်ကားတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုလို ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအစား ” ငါအခု Gym သွားမလို့၊ လိုက်မလား” လို့ ပြောင်းမေးကြည့်ပါ။ အဲဒါက သူမရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကဲ့ရဲ့တဲ့ ပုံစံ မပေါက်စေပဲ နှစ်ယောက် တူတူ အချိန်ဖြုန်းလိုတဲ့ ပုံစံ ပေါက်စေပါတယ်။
၂. ဒါ ဘယ်လောက်ကျလဲ
အဲဒီမေးခွန်းဟာ သူမကို အကဲခတ်ပုံ ပေါက်စေပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်တာ မကြိုက်ပါဘူး။
အဲဒီအစား ” ပြောစရာက အရေးတော့ မကြီးပါဘူး.. ဘယ်လောက်ပေးရလဲ ချစ်” လို မေးကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင်က သူမရဲ့ အဖြုန်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ရင်တော့ ဘဏ်မှာ Joint Acc ဖွင့်ထားပါ။
၃. ငါ မင်းမိဘတွေအိမ်ကို လိုက်ရမှာလား
လုံးဝ မမေးပါနဲ့။ သူမက သင် သူမမိဘတွေကို မုန်းတယ်လို့ ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကြားထဲမှာ နေရတဲ့ ဖိအားကိုလဲ ချက်ခြင်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင်သာ လုံးဝ မတွေ့ချင်ရင်တော့ ” ချစ်ရေ၊ ငါ အလုပ်တွေ နစ်နေလို့ မင်းမိဘတွေအိမ် လိုက်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ သူတို့ကို ချစ်တယ် ပြောလိုက်ပါ။” အဲလို ပြောကြည့်ပါ။ အခေါက်တိုင်းတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
၄. နင် လိင်ဆက်ဆံချင်နေတာလား
အဲလိုအမေးခံရတာဟာ မိန်းမတွေ လုံးဝ မကြိုက်ဆုံးအရာပါ။ အဲဒီမေးခွန်းနောက်မှာ စိတ်အား ထက်သန်မှု မရှိပဲ ပြီးပြီးရော လုပ်ပြီး ထွက်သွားမယ့်ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
နမ်းပါ။ ထိတွေ့ပါ။ ဘာမှ မမေးပါနဲ့။ သူမ စိတ်ဝင်စားရင် သူမ အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်တာကိုလဲ သူမပိုကြိုက်ပါတယ်။
၅. PMS ဖြစ်နေတာလား
” ဘာလို့ ရိုင်းနေတာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ တူတူပါပဲ။ သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေ ပျော့နွဲ့နေတာကိုသင်က ဂရုမစိုက်ပုံလဲ ပေါက်နေပါတယ်။
အဲဒီအစား ” ချစ် ဘယ်လို ခံစားနေရလဲ။ နေကောင်းရဲ့လား ” ဆိုတာ မေးပေးပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သင် ကြင်နာကြောင်း ပြတာ ဖြစ်ပြီး သူမကိုလဲ ရာသီလာနေကြောင်း ထုတ်ပြောခွင့် ပေးလိုက်တာပါ။
အဖြေသိပြီးသားပါ။ ” ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး” ဆိုပြီး မျက်လုံး ဝိုက်ကြည့်မှာပါ။ ဒီမေးခွန်းဟာ စိတ်ပူပုံအစား စွပ်စွဲပုံ ပိုပေါက်စေပါတယ်။
” ချစ် တစ်ခုခု ဖြစ်နေတာ ကိုသိပါတယ်။ ချစ် အဲဒါအကြောင်း ပြောချင်ရင် ကို့ကို ပြောပြပါ” ဆိုတာမျိုး ပြောင်းသုံးပါ။ မိန်းမတွေက သူတို့ပြောတာကို နားထောင်စေချင်ကြပါတယ်။ သင်က ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။
၇. အဲ့ဒါကြီး တကယ် ဝတ်မလို့လား
သူမကိုယ်သူမ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေမယ့် သေချာပေါက် နည်းလမ်းကြီးပါ။ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ပုံသူတို့ သံသယတွေ အမြဲ ရှိနေတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ အပြင်အဆင်ကို မထိပါးစေပါနဲ့။
အဲဒါအစား ” ချစ်က လှသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ ပိုလိုက်မယ်ထင်တယ် ” ဆိုတာ ပြောင်းသုံးပါ။ ပြောနေရင်းနဲ့လဲ သူမကို ထိထား၊ ဖက်ထားပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သင် တကယ် ဂရုစိုက်ပုံ ပေါက်စေပြီး အဝတ်လဲခိုင်းတာကို စော်ကားတာလို့ မမြင်တော့ပါဘူး။
တဈခါတဈလမှော မိနျးမနဲ့ စကားပွောရတာ မိုငျးကှငျးထဲ မကျြစိစညျးပွီး လြှောကျနရေသလိုပါပဲ။ မိနျးမတှဟော ယောကျြားတှထေကျ နူးညံ့ကာ ခံစားလှယျပွီး တုံ့ပွနျမှု ပိုမြားတတျကွပါတယျ။ သူတို့က မေးခှနျးတှကေို ဒီအတိုငျး မစဉျးစားပဲ သူဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ယူစဉျးစားတတျကွပါတယျ။
ကံမကောငျးစှာနဲ့ သငျ့မိနျးမက သငျ့ရဲ့ မေးခှနျးကို ပေါကျကှဲစရာတဈခုလို ပွောငျးပဈနိုငျပါတယျ။ ဒိမှာ သငျ သူမကို လုံးဝ မမေးသငျ့တဲ့ မေးခှနျး ၇ ခု ပါ။ အဲဒါတှအေစား ဘယျလိုမေးရမယျဆိုတာလဲ မေးပွထားပါတယျ။
၁. နငျ ဒီအပါတျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရဲ့လား
အဲဒါက ” နငျ ဝနသေလား ” လို့ မမေးလိုကျရုံ တမညျပါ။ သငျက ရိုးရိုးသားသားလေး မေးလိုကျရငျတောငျ သူမက စျောကားတဲ့ မေးခှနျးတဈခုလို ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီအစား ” ငါအခု Gym သှားမလို့၊ လိုကျမလား” လို့ ပွောငျးမေးကွညျ့ပါ။ အဲဒါက သူမရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို ကဲ့ရဲ့တဲ့ ပုံစံ မပေါကျစပေဲ နှဈယောကျ တူတူ အခြိနျဖွုနျးလိုတဲ့ ပုံစံ ပေါကျစပေါတယျ။
၂. ဒါ ဘယျလောကျကလြဲ
အဲဒီမေးခှနျးဟာ သူမကို အကဲခတျပုံ ပေါကျစပေါတယျ။ မိနျးမတှဟော သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို မေးခှနျးထုတျတာ မကွိုကျပါဘူး။
အဲဒီအစား ” ပွောစရာက အရေးတော့ မကွီးပါဘူး.. ဘယျလောကျပေးရလဲ ခဈြ” လို မေးကွညျ့ပါ။ ဒါမှမဟုတျ သငျက သူမရဲ့ အဖွုနျးနဲ့ ပါတျသတျပွီး စိုးရိမျရငျတော့ ဘဏျမှာ Joint Acc ဖှငျ့ထားပါ။
၃. ငါ မငျးမိဘတှအေိမျကို လိုကျရမှာလား
လုံးဝ မမေးပါနဲ့။ သူမက သငျ သူမမိဘတှကေို မုနျးတယျလို့ ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ကွားထဲမှာ နရေတဲ့ ဖိအားကိုလဲ ခကျြခွငျး ခံစားရပါလိမျ့မယျ။
တကယျလို့ သငျသာ လုံးဝ မတှခေ့ငျြရငျတော့ ” ခဈြရေ၊ ငါ အလုပျတှေ နဈနလေို့ မငျးမိဘတှအေိမျ လိုကျနိုငျမယျ မထငျဘူး။ သူတို့ကို ခဈြတယျ ပွောလိုကျပါ။” အဲလို ပွောကွညျ့ပါ။ အခေါကျတိုငျးတော့ မဖွဈပါစနေဲ့။
၄. နငျ လိငျဆကျဆံခငျြနတောလား
အဲလိုအမေးခံရတာဟာ မိနျးမတှေ လုံးဝ မကွိုကျဆုံးအရာပါ။ အဲဒီမေးခှနျးနောကျမှာ စိတျအား ထကျသနျမှု မရှိပဲ ပွီးပွီးရော လုပျပွီး ထှကျသှားမယျ့ပုံ ပျေါပါတယျ။
နမျးပါ။ ထိတှပေ့ါ။ ဘာမှ မမေးပါနဲ့။ သူမ စိတျဝငျစားရငျ သူမ အသိပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ခဉျြးကပျတာကိုလဲ သူမပိုကွိုကျပါတယျ။
၅. PMS ဖွဈနတောလား
” ဘာလို့ ရိုငျးနတောလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးနဲ့ တူတူပါပဲ။ သူမရဲ့ ခံစားခကျြတှေ ပြော့နှဲ့နတောကိုသငျက ဂရုမစိုကျပုံလဲ ပေါကျနပေါတယျ။
အဲဒီအစား ” ခဈြ ဘယျလို ခံစားနရေလဲ။ နကေောငျးရဲ့လား ” ဆိုတာ မေးပေးပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သငျ ကွငျနာကွောငျး ပွတာ ဖွဈပွီး သူမကိုလဲ ရာသီလာနကွေောငျး ထုတျပွောခှငျ့ ပေးလိုကျတာပါ။
အဖွသေိပွီးသားပါ။ ” ဘာမှ မဖွဈပါဘူး” ဆိုပွီး မကျြလုံး ဝိုကျကွညျ့မှာပါ။ ဒီမေးခှနျးဟာ စိတျပူပုံအစား စှပျစှဲပုံ ပိုပေါကျစပေါတယျ။
” ခဈြ တဈခုခု ဖွဈနတော ကိုသိပါတယျ။ ခဈြ အဲဒါအကွောငျး ပွောခငျြရငျ ကို့ကို ပွောပွပါ” ဆိုတာမြိုး ပွောငျးသုံးပါ။ မိနျးမတှကေ သူတို့ပွောတာကို နားထောငျစခေငျြကွပါတယျ။ သငျက ဖိတျချေါလိုကျရုံပါပဲ။
၇. အဲ့ဒါကွီး တကယျ ဝတျမလို့လား
သူမကိုယျသူမ စိတျမကောငျးဖွဈသှားစမေယျ့ သခြောပေါကျ နညျးလမျးကွီးပါ။ မိနျးမတှဟော သူတို့ပုံသူတို့ သံသယတှေ အမွဲ ရှိနတောပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ သူတို့ အပွငျအဆငျကို မထိပါးစပေါနဲ့။
အဲဒါအစား ” ခဈြက လှသားပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါနဲ့ ပိုလိုကျမယျထငျတယျ ” ဆိုတာ ပွောငျးသုံးပါ။ ပွောနရေငျးနဲ့လဲ သူမကို ထိထား၊ ဖကျထားပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သငျ တကယျ ဂရုစိုကျပုံ ပေါကျစပွေီး အဝတျလဲခိုငျးတာကို စျောကားတာလို့ မမွငျတော့ပါဘူး။
Previous: သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲ ဖို့ ခြေလှမ်း ခြောက်ခုပဲ လိုပါတယ်
Next: သင့်ကောင်မလေး သင့်နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြားနေပါသလား??